Mid kamid ah Mucjisooyinkii ugu Yaabka Badnaa ee Caalamka oo Dhawaan lagu Arkay Sri Lanka(Talow waa maxay) BBC News - iftineducation.com
iftineducation.com – Midkee ayaa horyimid Ukunta ama Doorada waa ciwaanada ugu waawayn ee jariiradaha iyo raadiyayasha dalka Sri Lanka iyo waliba warbaahinada caalamka kuwa ugu waa weyn.
kaliya ma ahan hadal haynta arinkan ee waxa kale oo ay dadka reer Sri Lanka ku qorayaan bogaga bulshada ee Twitter iyo facebooka ayagoo is waydiinaya keeba hordhasha ukunta ama dikaaga!
hadal hayntan ayaa tmid ka dib makii maagalo lagu magacabo Welimada oo ka tirsan dalka Sri lanka ay si toos ah u dhashay jiil-jiil ama dooro yar .
inta badan waxaa lagu yaqaanay doorada yar in ay ku dhalato oo kaliya marki ay ukunta ay ku fadhiisato dikaaga wayn mudo 21 beri ah hasa ahaatee Dooradan sidaa waa ee ka badalneedf waxa eena caadi sida dadka oo kale u Dhashay Jiil Jiilyar oo Nool.
lakiin inti lagu fadhin lahaa ukunta oo ay iskaga badali lahayd dooro ahaanta ayaa waxa la sheegay in Mucjisadaan dhacday Dooradana eey Caloosha ku qaaday Digaagan yar kadibna si caadi ah u dhashay inta umushay.
jiil-jiilka yar ayaa ah mid caafimaad qabo lakiin hooyadeed ayaa dhimatay ka dib marki ay dhashay Jiil jiilkan yar.
sarakiil ka tirsan xanaanada xoolaha oo ku sugan Halka Mucjisadan ka dhacday ee Welimada ayaa shegeen in waligood waxan oo kale ay hore arkin inta dooro Jiijiil caloosha ku qaado deetana dhasho.
madaxa Xanaanada xoolaha ee Welmada ayaa isna sheegay in uu baaray jii ljiilka hooyaded ka dib dhimashadeed isagoo ku arkay dhaawacyo gudaha ah qaasatan qaybta dheef shiidka ah taaso u ku micneeyay in ay tahay waxa ay u dhimatay hooyada jiil-jiilka yar
Dhacdo la yaab leh oo ka dhacday Mid kamid ah Xarumaha Ciidanka AMISOM ee Muqdisho kadib markii Askari uu mid kale u Dilay Hal Dollar